Khudbaddii RW Khayrw | allsanaag
Khudbaddii RW Khayrw
20th August 2018 admin Category :
Hoos ka daawo Raisawasaaeaha Soomaaliya Kheyre oo ka jawaabaya hadalkii madaxweynaha Puntland ee ahaa “Somaliya Muqdisho oo qura maaha”. Raisawasaraha Soomaaliya Xasan cali Khayre ayaa isaga oo u khudbadeenaya koox ka socotay xaafadda Dayniile ee magaalada muqdisho oo Khadiijo Diiriye soo abaabushay waxa ka muuqatay argagax iyo kalsooni la’aan uu isku dhex yaacay
“Haday jirto qof Soomaaliyeed oo ka welwelsan maalma la qeyqeylinaya ama buuq siyaasadeed baa dhacaya sidaa daraadeed Madaxda qolkeedii bay ku laabanaysa, waxaan idiin ballan qaadaya in aan idinla mari doono illaa meesha u danbeysa aan tegi doono.
Inaan ku bedelano dhaqankii ahaa anigu hadaanan wax helin dalkaa la duminaya, dalkaa kaa horeeya adiga! In aan ogaano in qofkasta, Xisbi kasta iyo Koox kasta ay ka weynyihiin, Jiritaanka Calanka, Nabadda iyo Dowladnimada” .
← Previous Post Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay midnimo iyo wada-shaqeyn →